SAWIRADA: 3-qof oo Russian ah oo loo qabtay qaraxii shalay ka dhacay Dalka Turkiga | shumis.net
Home » ISIS » SAWIRADA: 3-qof oo Russian ah oo loo qabtay qaraxii shalay ka dhacay Dalka Turkiga
SAWIRADA: 3-qof oo Russian ah oo loo qabtay qaraxii shalay ka dhacay Dalka Turkiga
Ciidamada amaanka Dalka Turkiga ayaa howlgalo ay sameeyeen waxa ay kusoo qabteen in ka badan 60-qof oo lala xaririnayo in ay xariir la leeyihiin Kooxda Daacish waxna ka abaabuleen weerarkii shalay lagu qaaday goob loo dalxiis tago oo kutaala Magaalada Istanbuul.
Dadka ay Ciidamada amaanka xireen waxaa ku jira sadax nin oo u dhashay Dalka Ruushka kuwaa oo la tuhmayo in xubno ka yihiin kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Ciraaq iyo Siiriya, waxaana xubnahan ku socda baaritaano.
Qunsuliyadda Ruushka ee magaalada Antalya ee dalka Turkiga ayaa xaqiijisay in laamaha amaanka dalka Turkiga ay xireen Sadax qof oo Ruushka u dhashay kuwaa oo lagu tuhmay in ay xubno ka yihiin Kooxda Daacish.
Qarax ismiidaamin ah oo shalay lagu qaaday goob loo dalxiis tago oo kutaala Magaalada Istanbuul ee dalka Turkiga ayaa waxaa ku dhintay 10-qof waxaa sidoo kale ku dhawacamay tiro kale oo badan, Dowlada Turkiga ayaana masuuliyada weerarkan dusha ka saartay Kooxda Daacish.
Title: SAWIRADA: 3-qof oo Russian ah oo loo qabtay qaraxii shalay ka dhacay Dalka Turkiga